Iziguli EzingoFakazi Ziyakwenqaba Ukumpontshelwa Igazi Futhi Ziyashesha Ukululama
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Armenia (SaseNtshonalanga) Isi-Azerbaijani Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Igbo Isi-Indonesia Isi-Otomi (SaseMezquital Valley) Isi-Ukraine Isi-Urdu IsiBhunu IsiCebuano IsiChol IsiChuvash IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFante IsiFinishi IsiFulentshi IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGreki IsiGujarati IsiHebheru IsiHindi IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKonkani (SesiRoma) IsiKorea IsiLatvia IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMaya IsiNahuatl (Saphakathi Nezwe) IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiNzema IsiPersia IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTamil IsiTarascan IsiTatar IsiTigrinya IsiTotonac IsiTsonga IsiTurkey IsiTzeltal IsiTzotzil IsiValencia IsiZapotec (SesiLachiguiri) IsiZulu
Iziguli EzingoFakazi Zivame Ukululama Masinyane
E-AUSTRALIA: Iziguli ezingoFakazi BakaJehova ezisesibhedlela—ezingavumi ukumpontshelwa igazi ngenxa yezinkolelo zazo—empeleni ziyashesha ukululama kunezinye iziguli,” kubika iphephandaba i-Sydney Morning Herald langomhla ka-2 October 2012.
Lo mbiko ucaphuna uJames Isbister onguProfesa Wezokwelapha eSydney Medical School, e-University of Sydney. “UProfesa Isbister wathi oFakazi BakaJehova belashwa kangcono odokotela abazama ukonga igazi labo [oFakazi]. Ngenxa yalokho maningi amathuba okuba basinde futhi bahlala isikhathi esifushane esibhedlela nasendaweni yokunakekela iziguli ezibangwa nezibi uma beqhathaniswa nabantu abampontshelwa igazi lapho behlinzwa,” kubika leli phephandaba.
Baningi abantu abacabanga njengoDokotela u-Isbister. Ikhuluma ngeziguli ezingoFakazi ezihlinzwa inhliziyo, i-Archives of Internal Medicine yango-August 13-27, 2012, ithi: “OFakazi baba nezinkinga ezimbalwa futhi bahlala isikhathi esifushane kuneziguli ezimpontshelwa igazi.”
Ingabe OFakazi BakaJehova Bayakwamukela Ukwelashwa Odokotela?